काठमाडौंबर्डफ्लूका कारण एक युवकको ज्यान गएपछि अण्डा र कुखुराको मासु खान हिचकिचाएका उपभोक्ताहरुलाई चिकित्सकले डराउन नपर्ने सुझाब दिएका छन् । मासु र अण्डा राम्रोसँग पकाएर खाएमा रोग लाग्ने सम्भावना नहुने चिकित्सकको भनाई छ ।कुखुराको अण्डा र मासु पकाउँदा ७० डिग्री सेल्सियस भएमा भाइरस मर्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् । स्वास्य सेवा विभाग इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. विवेककुमार लालले कुखुराको मासु र अण्डा कम्तिमा ७० डिग्री सेल्सियस भएमा भाइरस मर्ने जानकारी दिए ।शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका रिसर्च युनिट संयोजक एवं सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनले बर्डफ्लू कारण कुखुराको मासु वा अण्डा खानै नहुने भन्ने भ्रममा पर्न आवश्यक नभएको बताए । एक सय डिग्री सेल्सियस नभई उसिनेको अण्डा पाक्दैन । यसले गर्दा अण्डा खानै नहुने भन्ने होइन ।’बर्डफ्लूको संक्रमणबाट एक युवकको मृत्यु भएको सार्वजनिक भएपछि कुखुराको अण्डा र मासु खान उपभोक्ताहरु हिचिकिचाएका छन् । बर्ड फ्लूको संक्रमणपछि गत चैत १५ गते उनको निधन भएको थियो । अन्नपूर्णबाट
२० बैशाख २०७६, शुक्रबार ०८:३३
बर्डफ्लूका कारण एक युवकको ज्यान गएपछि अण्डा र कुखुराको मासु खान हिचकिचाएका उपभोक्ताहरुलाई चिकित्सकले डराउन नपर्ने सुझाब दिएका छन् । मासु र अण्डा राम्रोसँग पकाएर खाएमा रोग लाग्ने सम्भावना नहुने चिकित्सकको भनाई छ ।
कुखुराको अण्डा र मासु पकाउँदा ७० डिग्री सेल्सियस भएमा भाइरस मर्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् । स्वास्य सेवा विभाग इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. विवेककुमार लालले कुखुराको मासु र अण्डा कम्तिमा ७० डिग्री सेल्सियस भएमा भाइरस मर्ने जानकारी दिए ।
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका रिसर्च युनिट संयोजक एवं सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनले बर्डफ्लू कारण कुखुराको मासु वा अण्डा खानै नहुने भन्ने भ्रममा पर्न आवश्यक नभएको बताए । एक सय डिग्री सेल्सियस नभई उसिनेको अण्डा पाक्दैन । यसले गर्दा अण्डा खानै नहुने भन्ने होइन ।’
बर्डफ्लूको संक्रमणबाट एक युवकको मृत्यु भएको सार्वजनिक भएपछि कुखुराको अण्डा र मासु खान उपभोक्ताहरु हिचिकिचाएका छन् । बर्ड फ्लूको संक्रमणपछि गत चैत १५ गते उनको निधन भएको थियो ।
अण्डा खान डराउनु पर्दैन : चिकित्सक, कुखुराको मासु
Prevएनसीसी बैंकको अवकाश कोषद्वारा ७० प्रतिशत लाभांश
पुरुषको तुलनामा महिला वढी रुन्छन् , यस्तो छ कारणNext